नेपाल आज | आरक्षणमा होइन प्रतिष्पर्धामा विश्वास ( भिडियोसहित)
मिसेज व्युटी क्विन २०२० कि विजेता सन्तोषी शाही ठकुरी राप्रपाकी सचिव र कर्णाली प्रदेशकी संयोजक पनि हुन् । राजनीतिमा सक्रिय भएपनि अन्य विधामा पनि अब्बल हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएको उनी बताउँछिन् ।
शाही भन्छिन्, ‘सुरुमा सामान्य सोच लिएर प्रतियोगितामा सहभागी भए । केही सिक्न, बुझन पाइन्छ, व्यक्तित्व विकासमा मद्दत नै पुग्छ भनेर भाग लिए । विस्तारै आफनो कला देखाउँदै गए । जित्न होइन सिक्न गएकी थिँए, तर जितेर आए । ’
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतकी बासिन्दा शाही काठमाडौं बालुवाटारमा बस्छिन् । उनका दुई छोरी छन् । दुवै छोरी क्याम्पसमा अध्ययनरत् छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर शाही मुलुकको अवस्थाबाट आफू बढी चिन्तित हुने गरेको बताउँछिन् ।
शाहीका अनुसार सबैभन्दा पहिले शासकको सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । सरकार संचालन गर्नेहरु भन्नेबेला महिला, दलित, उत्पीडित, सिमान्तकृत, समावेशी लगायतका बिभिन्न किसिमका कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा केही गर्दैनन् । अहिले विकास र समृद्धिको नारा लगाएका छन् तर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उनीहरु आफै गरिरहेका छन् ।
शासक र सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले आफू उदाहरणीय बनेर नदेखाएसम्म मुलुक परिवर्तन असम्भव छ । अहिलेका यी दल र नेताबाट परिवर्तन सम्भव छैन । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापना गर्नु जरुरी भैसक्यो ।
जहाँसम्म महिला उत्थानको कुरा छ, त्यसका लागि पनि सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । महिलालाई आरक्षण दिएर उनीहरुको समग्र उत्थान हुँदैन । कुनै खास विशेष अवस्थामा बाहेक आरक्षणले महिलाको स्तर बढाउने होइन, बरु घटाउँछ । महिलालाई क्षमता अभिबृद्धि र प्रतिष्पर्धा गर्नमा प्रेरित गर्नु उत्तम हुन्छ ।
पछिल्लो समय पुरुषलाई महिला विरोधीका रुपमा चित्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । यो विल्कुल गलत हो । महिला र पुरुषको सहकार्य हुनुपर्छ । महिलासंग पुरुष बोल्दैमा गलतरुपमा लिनु हुँदैन । सोचमा समस्या भनेको यही हो । महिला पुरुष भनेर किन सोच्ने ? सोच्ने त ‘इस्यू’ मा होइन र ?
आज श्रीमान श्रीमतिबीच तनावका कुरा बढी सुनिन्छन् । हुँदाहुँदा सम्वन्ध विच्छेदका घटना समेत बढेका छन् । यो सबै भनेको असमझदारीले हुने हो । श्रीमान श्रीमतिले मनमा कुनै शंका उपशंका उठ्ने वित्तिकै शेयर गरिहाल्नु पर्छ । लुकाउनु हुँदैन । राती सुतेकाबेला श्रीमान मध्यरातसम्म मोबाइलमा अरुसंग ‘च्याट’ गर्न थालेपछि श्रीमतिले शंका गर्दिनन् त ? श्रीमानको केसमा पनि त्यही हो ।
शाही मन भुलाउन कहिलेकाहिं गीत सुन्छिन् । उनको छनोटमा वियोगान्त नभइ खुशी र उमंगका गीतहरु पर्छन् । उनी भन्छिन्–‘गीतको सिधै प्रभाव मानिसमा पर्छ । त्यसैले दुःखी गीतहरु सुनेर झन दुःखी बन्नु हुँदैन । ’